The Boat (2018) | MM Movie Store
မျောလတာနိုငျငံရဲ့လှပသောနှရောသီ နတေ့ဈနမှေ့ာတံငါသညျလူငယျ တဈယောကျဟာသူရဲ့ လှလေေးနဲ့ ငါးမြှားရနျ ပငျလယျထဲ ထှကျလာခဲ့တယျရုတျတရကျ ရာသီဥတု ပွောငျးလဲပွီး
အမှောငျထုထဲမှာ သူဟာ အိုငျးလှပျဈ လို့ချေါတဲ့တောကျပတဲ့အဖွူရောငျ ရှကျလှကေိုတှလေို့ကျမိတော့ လှပေျေါတကျ စုံစမျးကွညျ့လိုကျတယျရှကျလှပေျေါမှာမညျသူတဈဦးတဈယောကျမှ မရှိတော့ပွနျဆငျမယျလုပျတဲ့အခါအလာတုနျးက ရှကျလှမှော သခြောခညျြထားခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့လှလေေးဟာ မရှိတော့ဘူး
ဒါနဲ့ အဲ့ဒီ ရှကျလပေျေါမှာပဲ …ရဒေီယိုနဲ့ ဗလကျတာဆိပျကမျးထိနျးခြုပျရေးကိုအကွောငျးကွားပွီးနောကျဘာကွောငျ့ လူတဈဦးမှ မရှိတာကို စပျစုရငျးသနျ့စငျခနျးထဲ ဝငျကွညျ့လိုကျတဲ့အခါတံခါးက လော့ကသြှားတယျ …
အဲ့ဒီနောကျမှာတော့ဒီရုပျရှငျဟာမမွငျရတဲ့ရနျသူနဲ့ ထိပျတိုကျရငျဆိုငျရတဲ့အခါလူငယျတဈယောကျရဲ့ကွုံတှလေ့ာတဲ့ထိတျလနျ့မှု မွငျကှငျးမြားအခကျအခဲမြား၊ အတှအေ့ကွုံနဲ့ဇှဲရှိမှုတို့ကို အသုံးခရြငျး တဈယောကျတညျးဖွရှေငျးရပုံမြားကို မွငျတှရေ့မှာပါ ….
မော်လတာနိုင်ငံရဲ့လှပသောနွေရာသီ နေ့တစ်နေ့မှာတံငါသည်လူငယ် တစ်ယောက်ဟာသူရဲ့ လှေလေးနဲ့ ငါးမျှားရန် ပင်လယ်ထဲ ထွက်လာခဲ့တယ်ရုတ်တရက် ရာသီဥတု ပြောင်းလဲပြီး
အမှောင်ထုထဲမှာ သူဟာ အိုင်းလွပ်စ် လို့ခေါ်တဲ့တောက်ပတဲ့အဖြူရောင် ရွက်လှေကိုတွေ့လိုက်မိတော့ လှေပေါ်တက် စုံစမ်းကြည့်လိုက်တယ်ရွက်လှေပေါ်မှာမည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မှ မရှိတော့ပြန်ဆင်မယ်လုပ်တဲ့အခါအလာတုန်းက ရွက်လှေမှာ သေချာချည်ထားခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့လှေလေးဟာ မရှိတော့ဘူး
ဒါနဲ့ အဲ့ဒီ ရွက်လေပေါ်မှာပဲ …ရေဒီယိုနဲ့ ဗလက်တာဆိပ်ကမ်းထိန်းချုပ်ရေးကိုအကြောင်းကြားပြီးနောက်ဘာကြောင့် လူတစ်ဦးမှ မရှိတာကို စပ်စုရင်းသန့်စင်ခန်းထဲ ဝင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါတံခါးက လော့ကျသွားတယ် …
အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဒီရုပ်ရှင်ဟာမမြင်ရတဲ့ရန်သူနဲ့ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါလူငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့ထိတ်လန့်မှု မြင်ကွင်းများအခက်အခဲများ၊ အတွေ့အကြုံနဲ့ဇွဲရှိမှုတို့ကို အသုံးချရင်း တစ်ယောက်တည်းဖြေရှင်းရပုံများကို မြင်တွေ့ရမှာပါ ….
9-1-1 Lone Star (Season 1) ၊အပိုငျး (၉)